1. အဲ့ဒါဘာလဲ? လာရန်ရည်ရွယ်ဘယ်တော့မှမ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းမပြုမီအချိန်ကြာမြင့်စွာလာမယ့် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်, စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခြင်း၏အချက်အထိ, ဘာမှမလုပ်နိုင်ခြင်း။ လူများစွာသည်ကြို့ထိုးပြtheနာကိုကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပေမည်။ တစ်ခါတစ်ရံထိုသို့သောမဖြစ်သင့်သောအချိန်များတွင်လာတတ်သည် အစည်းအဝေးထဲမှာဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ်အရေးကြီးသောဖြစ်ရပ်များကိုဆွေးနွေးခြင်း သို့မဟုတ် Kaiwa မွေးဖွားလာပါက ဒီအကြောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါသူဟာစိတ်ရှုပ်ထွေးပြီးစိတ်နှလုံးကိုဒေါသတကြီးပွေ့ဖက်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့်မကြောက်ပါနဲ့ ကြို့ထိုးခြင်းကိုမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်ကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သိလာပြီဖြစ်သည်။ စိုးရိမ်စိတ်ကိုရှောင်ရှားရန်သင့်အားပြောပြရန်ကျွန်ုပ်တို့စုရုံးမိခြင်းဖြစ်သည် ဒီလက္ခဏာပြန်လာတဲ့အခါ
2. ကြို့ထိုးခြင်းအကြောင်းရင်းများကိုသင်မသိအောင်သင်၏ကြို့ထိုးများကိုမည်သို့ဖယ်ရှားရမည်ကိုမသိမီ။ အကြောင်းပြချက်ရှိရမည် ဒီစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့လက္ခဏာကိုဂရုစိုက်ပြီးကာကွယ်နိုင်တဲ့သူကိုလုပ်တဲ့သူဘယ်သူမဆိုရင်ဘတ်အခေါင်းပေါက်နဲ့ဝမ်းဗိုက်အကြားရှိအမြှေးပါးကြွက်သားများရုတ်တရက်ကျုံ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတာ။ ကျုံ့၏ လျင်မြန်စွာရှူရှိုက်မိခြင်းအတွက်ရလဒ် တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ၀ င်လာသောလေသည်ရုတ်တရက်ပိတ်သောအသံကြိုးများကြောင့်ပိတ်မိနေသည်။ အဆိုပါ laryngeal ကြွက်သားကျုံ့ကနေ ကြို့ထိုးသံကိုကျွန်ုပ်တို့အားမကျေမနပ်ဖြစ်စေသည် ၎င်းသည်ရေတိုဖြစ်ပြီးနောက်ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်သို့မဟုတ်အချို့ကိစ္စများတွင် ၄၈ နာရီကျော်ကြာမြင့်နိုင်သည်။ အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်း အမြန်အစားအစာကိုစားပါ၊ အပြည့်အဝမဝါးပါနှင့်။ ၎င်းသည်စိတ်လှုပ်ရှားသောစိတ်များ (သို့) ရုတ်တရက်အပူချိန်ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရုတ်တရက်ချိန်ညှိစေနိုင်သည်။
3. ကြို့ထိုးဖယ်ရှားပစ်ရန်နည်းလမ်း5နှင့်ခန္ဓာကိုယ်မထိခိုက်ပါဘူး မကြာခဏကြို့ထိုးသူ ဒီနေ့လုံခြုံစိတ်ချရလွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီ။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ထားရန်မထိခိုက်ပါ။
4. အလွန်အေးသောရေတစ်ငုံသောက်ပါသို့မဟုတ်ရေအေးနှင့်အတူပြုံးပါ။ ၎င်းသည်ရေကြီးသောခွက်ကြီးတစ်ခွက်သောက်ခြင်းဖြင့်သင်ပိုမိုအသက်ရှူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်၏ရေသည်သင်၏အသက်ရှူမှုကိုဖွင့ ်၍ အအေးပေးသည့်ကြွက်သားများကိုလည်းကူညီပေးနိုင်သည်။ မွန်းကျပ်ခြင်းမှညဥ့်နက်သည်။
5. ၁၀ ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရေတွက်ခြင်းဖြင့်အချိန်တိုတိုအတွင်းအသက်ရှုပါ။ ၎င်းသည်ပထမနည်းနှင့်ဆင်တူသည်။ သင့်ရဲ့အသက်ရှုကိုင်ပြီးပြီးနောက် ကျနော်တို့ကပိုပြီးအပြည့်အဝရှူနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ညနှောင်းပိုင်း၏ရောဂါလက္ခဏာများသက်သာစေရန်ကူညီနိုင်သည်။
6. သံပုရာအချပ်တစ်မျိုးသို့မဟုတ်သကြားဓာတ်တစ်မျိုးကဲ့သို့အချဉ်များသောချိုသောအစားအစာများကိုစားပါ။ အစားအစာရဲ့အရသာကနေ မည်သည့်ထိခိုက်မှုမဖြစ်စေဘဲ
7. သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုထိတ်လန့်စေပါ ထိတ်လန့်စရာဖြစ်သည့်အခါခန္ဓာကိုယ်သည်မြန်မြန်ဆန်ဆန်အသက်ရှုသည်။ ထိုအခါကြွက်သားများလျင်မြန်စွာတုန်လှုပ်ရာမှဆန့်
8. နှာချေခြင်းသို့မဟုတ်နှာချေခြင်းလက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်စေသည် ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအသက်ပြင်းပြင်းရှူခြင်းနှင့်နှာချေခြင်းကအမြှေးပါးနှင့် windpipe ကြွက်သားများကိုလေ့ကျင့်ရန်ကူညီသည်။
9. အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောခြေလှမ်းများနေဆဲမပျောက်ပါက ထပ်မံ၍ ကြို့ထိုးခြင်းသည် ၄၈ နာရီကျော်အထိကြာမြင့်သည့်အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေရန်အတွက်ဆေးကုသမှုခံယူရန်ဆရာ ၀ န်နှင့်တွေ့ရလိမ့်မည် ငါပြောခဲ့သလိုပဲရောဂါလက္ခဏာတိုင်းရဲ့ရင်းမြစ်တွေရှိတယ်။ ထို့အပြင်အချိန်ကြာကြာမွှေနှောက်ခြင်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်သေချာသင့်ကြောင်းသတိပေးလက္ခဏာများကိုပေးသည်။